booliska gobolka bari oo howlgal ay sameeyeen kusoo qabtey dad looga shakiyey inay kadanbeeyeen qaraxii xalay ka dhacey boosaaso. – Radio Baidoa
booliska gobolka bari oo howlgal ay sameeyeen kusoo qabtey dad looga shakiyey inay kadanbeeyeen qaraxii xalay ka dhacey boosaaso.
Xalay Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari waxaa ka dhacay qarax khasaaro geystay oo lala eegtay Ciidamo ka tirsan Booliska Gobolka Bari xilli ay dhaq dhaqaaqyo ka wadeen Gudaha Magaaladaas.
Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu Aaso ayaa waxaa la sheegay in lala beegsadey Ciidamada xilli ay ku guda jireen hubinta dhaqangalka Bandowga Habeenkii ee horey loo saarey Magaaladaas.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 10 Ruux oo isugu jire 9 qof oo Shacab ah iyo askari ka tirsan ciidamada Booliska Gobolka Bari,waxaana qaraxaasi ka hadlay taliska Ciidanka Booliska Gobolka Bari.
War-saxaafadeed kasoo baxey Taliska Ciidanka Booliska Gobolka Bari ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada oo ku guda jira hubinta Bandowga qaraxa lala beegsadey,isla markaana dadka ugu badan ee ku waxyeeloobay ay yihiin Shacab.
Sidoo kale War kasoo baxey Taliska Ciidanka Booliska Gobolka Bari ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal ay sameeyeen Ciidamada Booliska ay ku qabteen dhowr qof oo looga shakisan yahay inay qaraaasi ka dambeeyeen,isla markaana baaris ay ku hayaan.
Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa maalmihii la soo dhaafay amnigeeda waxaa uu ahaa mid wanaagsan, in kastoo mararka qaar ay ka dhacaan dilal iyo qaraxyo lala beegsado Ciidamada Booliska Puntland.